Rabshadihii Ka Dhacay Itoobiya Oo Loo Xidh-Xidhay 359 Qof – somalilandtoday.com
Rabshadihii Ka Dhacay Itoobiya Oo Loo Xidh-Xidhay 359 Qof
(SLT-Addis Ababa)-Booliska deegaanka Oromada ayaa sheegay rabshadihi toddobaadki hore ka dhacay dalka Itoobiya oo ay dad badan ku dhinteen dadki ku lug lahaa oo gaadhaya 359 qof in xabsiga loo taxaabay.
Taliyaha Booliska Oromada Jeneraal Kafyalew Teferra oo BBC u warramay wuxuu sheegay xaaladda deegaanka Oromada oo ay rabshadaha ugu badan ee dalka Itoobiya ay ka dhaceen inuu hadda xasiloon yahay.
Tirada rasmiga ah ee dadka rabshadaha ku dhintayna sida ay boolisku xaqiijiyeen waa 67 qof, Axadda wixii ka dambeeyeyna wax rashado ah ma dhicin ayuu yidhi.
Wuxuuna Jeneral Tafari uu sheegay inta ay rabshaduhu socdeen in kaniisado iyo masaajidba dhibaata loo geystay oo qaarkood la gubay.
Taliyaha Booliska wuxuu intaasi ku daray 80% (54 qof) dadka rabshadahaasi ku dhintay ay ahaayeen kuwa ku dhintay gacan qaad ka dhex dhacay kooxa iska soo horjeeda oo mudaharaadyo dhigayey.
Hase yeeshee, rabshadaha si siyaasadeysan ku billawday marki dambana qaab diimeed iisu beddelay lama dhihi karo “koox hebla waxaa saa gaaray iyo koox hebla intaasa ka dhimatay, balse rabshaduhu markay diin iisu beddeleen labada diimood ee Kirishtanka iyo Muslimkaba ay dad ka dhinteen” ayuu yidhi.
Ilaa iyo hadda xogta aan haynana magaalada Adaama waxaa lagu gubay hal masaajid, laba kaniisadood oo meel ka baxsan magaalada ku yaallana waa la gubay ayuu yidhi.
Taliyaha oo ka hadlayey rabshadaha dhawaan ka dhacay qayb ka mid ah ee deegaanka Oromada inuu booliska uu ka gaabiyey inuu wax ka qabto iyada oo sida oo kalana lagu eedeeyo rabshadaha iney dhexdhexaad ka ahaayeen wuxuu yidhi: “Booliska deegaanka Oromada si uu rabshadaha uu uga hortago ilaa iyo naf ayuu u huray” isaga oo tilmaamay dadaalka ay booliska u galeen xakameynta rabshadahaasi.
Hase yeeshaee, dadka mudaharaadyada isugu soo baxay oo aad u badnaa meelaha qaar waxay ka awood bateen askarti rabshadaha iney ka hortagaan loo howl geliyey ayuu yiri.